Mai Chibwe VekwaZimuto: Kana umwe wako asipo ungaita sei nezemo?
Kana umwe wako asipo ungaita sei nezemo?
Mazuvano tinoona kuti zvifambiso zvawandisa uye vanhu vogara vakatarangana zvokuti munhu umwe chete anokwanisa kuita hama munyika dzakasiyana siyana. Akaenda kundovhakasha hazviiti kuti adzoke musi iwoyo, zvinoreva kuti umwe wake anosara ega mumba, iyevo anenge ari ega kwaari ikoko.
Kana muviri wako wajaira kugarorhojana nomurume/ mukadzi wako mumba, chinhu chinonetsa kuti uite nguva usina wekubvisana naye zemo. Zemo harina shasha. Kana rakubata rinokwanisa kuuya nesimba zvokuti rinoda kubviswa. Uyezve fungwa dzinoriteverera zvinova zvinorikudza zvoita nguva unaro.
Varume vanhu vanoti akaita zemo akashandisa maoko ake haanetseki kuribvisa nokuti anokasira kubudisa urume zvatopera iota hope dzake, mangwana omirirazve kurhoja maoko. Zvichingodaro kusvika mukadzi adzoka. Hapana chinokuvadza pakuzvirhoja maoko. Mhomho yese yaunoona pama BUS stop kana muzvitoro vanhu vakanatsozvika pautano asi kana vava kumba vanotombozvirhoja maoko kuti zvinhu zvifambe. Koitazve nyaya yokuti vanhurume vakawanda chose chero mukadzi arimo mumba vanopota vachizvirhoja maoko. Zvinohi manakire acho akasiyana poti okuvata nomukadzi koti ekuzvirhoja maoko. Imi varume ndimi munoziva kusiyana kwazvo. Iwewo mukadzi wemumba ukaona murume wako achizvirhoja, hazvirevi kuti iwe haugoni basa. Zvinoreva kuti manakire ako iwe neemaoko ake zvakasiyana saka rega aite. Pamwewo kana mava mese dzidza kushandisa maoko ako pachombo chake kuti uhwisise maitigwe azvo. Kana uri kumwedzi kana kuti akakuwanzira nezuro ukasvuuka mukati zvokugwadziwa, unozowana mukana wekubvisa murume zemo pamunenge musingakwanisi kupinzana. Kana usipo hwisisa kuti murume wako anoita zemo rinoda ubviswa. Kana wava kumufonera mukurudzire kuzvibvisa zemo pafoni kuti avate zvakanaka. Unoziva zvokutaura.
Hino kuvanhukadzi kunonetsa pakuti kune vakadzi vakawanda vasingawanzosvika paORgasm nokuiswa nomurume uyezve vasingawanzozvibvisa zemo. Munhu akadai anokwanisa kuti akatanga kufunga murume wake akaita zemo rinokwanisa kutora nguva anaro oshaya hope. Munhukadzi munhu anofanirawo kudzidza maitire emuviri wake zvokusvika pakuziva kuti chinomukasirisa kubva zemo chii. Kana murume asipo, unokwanisa kuzvikwizirira bhinzi kusvika wabva zemo. Pamunofonerana nomurume wanawo zvokutaudza murume zvinokupai mese zemo. Zvadaro ukafunga zviri uita murume wako nemaoko ake ukaitawo wega iwe unokwanisa kubva zemo zvinotofadza hazvo. Kana mava mese dzidza kuti murume ari mukati iwewo maoko ako ari kukwizirira bhinzi kuti ujaire kuzvibatsira kukasira kusvika pokupedzisira kunakigwa.
Kana wava mukadzi/murume wemunhu hauchisiri pwere saka hwisisa kuti zemo rinoshungurudza uye rine mushonga waro warinoda kuitwa kuti ripere.
Maitire okuzvibvisa zemo akasiyana siyana kuvanhu. Kune vaneunyazvi pazviri vannatsoziva kuti ndikadai nokudai ndinokasira kupedza. Koitawo vamwe vanoona sokuti ari kuhura nemaono ake nokuti murume/mukadzi haapo. Kana mese muchihwisisana kuti munopota muchishandisa mawoko zvoreva kuti munokurudzira kudaro saka hapana chihure chaitikapo. Vanhu vashomanana Mupasi rese vasingashandisi maoko avo pakuzvibvisa zemo. Asi vakawanda vanovanzira murume/mukadzi pazviri Havana kusununguka kuzviita achiona. Koitawo vamwe vasingatodi kuhwa kuti mukadzi/murume wake ange achizvibvisa zemo. Anoona sokuti amhurwa kuti haagoni basa. Bodozve, munhu uyu iwe wakazoroorana naye atombozvibvisa zemo kwemakore akawanda saka unodirei kuti achiregera nhasi. Uku kusangohwisawo zvinhu zvoupenyu hwevanhu.
Musikana mudiki anowanzotanga kuzvibatabata nokuhwisisa panonaka kubatwa ava nemakore gumi nematatu. Paanozosvika makore gumi nemashanu anenge ava kutozvigona chose. Kuzoti ava kumakore 18 anenge achiita zemo rokumira bhinzi nokunyorova mukati kanopfuura kashanu pazuva, zvikuru avete. Ndizvo muchiona kuti kana wawanikwa unokwanisa kupinzwa chombo uri kuhope zvisingagwadzi, Iri ngari yokuti pakugumhana miviri yenyu muvete, mese munoita zemo.
Varumewo vanotanga kuzvibvisa zemo vane makore 14 zvokuti pamwe anotoita kaviri pazuva. Chiombo chomukomana chinotanga kumira ari mudumbu ramai vake. Kasi paanozoti chakura omera choya ndipo paanowanza kudzidza kuzvibvisa zemo. Kana aroora anowanza kuderedza kuzvibvisa zemo asi haaregi zvachose. Hapana chakaipa pazviri.
Saka apa tiri kuti kana umwe wako asipo usaita vhikiyese uchiriritira zemo kusvika rakundwa nehope. Bodo bvisa zemo uye udza umwe wako uti uri kumufunga zvokuti wazara zemo sakawafunga zvokumufunga uchibvisa zemo. Uchaonawo kuti paanodzoka munomboita nguva muchitsividza kupatsana kwenyu. Uyezve musi wamunenge musingakwanisi, sokuti umwe ari kumwedzi, mese munohwisisana kuti uya asiri kumwedzi anofanira kubatsigwa kubvisa zemo.
Nyaya dzezemo pavanhu vakaroorana hadzisi dzokuvanzirana kana kuda kuemerana nadzo. Kana murume wako ataridza kuti ane zemo wana mukana wekuti ribviswe. Kana mukadzi wako ataridza kuti ane Zemo, wana mukana wekuti ribviswe. Kana usipo mukurudzire azvibvise ega womuudza kuti kana wadzoka uchamupa COMPENSATION.
Posted by Mai E Chibwe at 11:33
Makadii mai Chibwe ini nyaya yangu iri pamatinji .Pandaive teenager ndakaudzwa kuti ndidhonze asi handina.Iko zvino ndave kuda kuroorwa asi handina kudhonza.Ndingawanewo here ruzivo pakuti anobatsireyi uye ndingaite sei kuti akure.My fiance anenge asina ruzivo nazvo asi ndinoda chose kuti kana paine zvinoda kugadziriswa zvigadzirisike.
Chimboverenga apo pakahi "Kudhonza Matinji". Kudhonza hakunei nezera. Chero mukadzi ave nevana anokwanisa kudhonza zvichingoita.
Asi hwisisa kuti kudhonza hakuna chakunowedzera pakuvatana. Inongorowo nyaya yokuita nemaitire edu asi hazvina chazvinowedzera. Kunakigwa kwakangofanana zvese varume nevakadzi. Asi kungoti vamwe varume vanoda kuona matinji marefu.
What about sex with a water melon? Ndakaudzwa kuti ukabooira buri pawater melon then you mush up the inside unokwanisa kunakirwa naro rough. Pane akambozvizamawo here?
1 September 2016 at 14:18